Dowladda Eriteriya oo ku eedeysay dalka Turkiga inuu ku dhaqaaqday “ficil-foolxun”. | STN Somali
Home Wararka Dowladda Eriteriya oo ku eedeysay dalka Turkiga inuu ku dhaqaaqday “ficil-foolxun”.
Dowladda Eriteriya oo ku eedeysay dalka Turkiga inuu ku dhaqaaqday “ficil-foolxun”.
War saxaafadeed Arbacadii ay soo saartay dowladda Eriteriya ayay ku eedeysay dalka Turkiga iyo Qadar in ay ka shaqeynayaan sidii ay khalkhal u galin lahaayeen hanaanka nabaddeed ee kala dhaxeyo dalkooda wadanka Itoobiya iyo guud ahaan Geeska Afrika.
Sida laga soo xigtay war qoraal ah oo la soo dhigay bogga rasmiga ah ee Wasaaradda Warfaafinta ee Eretariya ayaa lagu yiri ” waxaa jiro ficilo ka dhan ah Eritariya oo waliba si isdabajoog ah ay u qaaday dawladda Turkiga ee uu hogaaminaayo ( Xisbiga Caddaaladda iyo Horumarka) .
Wasaaradda ayaa shaacisay in tallaabooyinkan wax yeelada leh oo ay qaaday turkiga ay maalgalinteeda lahayd dowladda Qatar.
Wasaaradda ayaa sidoo kale cadeysay in Ficiladaani foosha xun in ay sii kordhayeen sannadkii la soo dhaafay, iyada oo ujeedadu tahay in la kala dhantaalo hanaanka nabaddeed ee aan la leenahay Itoobiya iyo guud ahaan Geeska Afrika.
War saxaafadeedka ayaa lagu xusay in “xukuumadda Turkiga ay uga furtay wadankeeda horraantii sannadkan xafiis gudoomiyaha ururka” Muslimiinta Eritrea” iyadoo aan magacaasi lagu furin xafiiska balse lagu sheegay xafiiska inuu yahay mid ay leeyihiin “Ururka Culumada Eritriya. ”
Bishii July ee la soo dhaafay ayaa labada madaxweyne ee dowladda Itoobiya Abye Axmed Cali iyo Madaxweynaha Eratriya Isayaas Afwerki wada galeen heshiis ” nabaddeed” oo si rasmi ah u soo afjaray labaatan sano oo cadaawa ah ee uu dhexeeyay labada dal.
Previous articleXishoodka dumarka iyo marka ugu horeyso ee caadada dhiigga ay isku arkaan.
Next article60 sano ka dib .. Biljamka oo raaligelin ka bixiyay dhibaatooyinkii ay u geysteen carruurta Afrika xilliyadii gumeysiga